Zvemagariro Kushambadzira kwekufamba uye Kugamuchira Vaeni | Martech Zone
Zvemagariro Kushambadzira kweKufamba uye Kugamuchira Vaeni
Mugovera, October 13, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Tine mutengi mu travel insurance indasitiri inoita basa rinoshamisa kusimbisa vezvenhau kusimudzira bhizinesi ravo Nekuve nzvimbo huru yekuenda kwenhau dzekufamba uye kuraira, ivo vakaramba vachiwedzera kuwedzera kukura. Inotungamirwa naBryant Tutterow uye Muhummad Yasin, tashamiswa nekurongedzwa uye kuburitsa timu yavo yanga iri mumusika wakanyatsogadziriswa.
Masocial network uye ongororo yemushandisi zvinogona kukanganisa zvakanyanya pasarudzo dzekushanya dzevashanyi vewebhusaiti vachitsvaga chero chinhu kubva kuzororo kana nzendo dzebhizinesi kuenda kunzvimbo dzekudyira. Kubva kuMonetate Infographic: Kushandisa Social Networks Kukuchidzira Kufamba uye Kugamuchira Vaeni
Iko kukanganisa uye mhedzisiro zvese zvakakosha uye kuyerwa. Kufamba, kungave kwebhizinesi kana kunakidzwa, ndechimwe chezvinhu izvo munhu wese anotora nguva kuronga. Kunyangwe iri kutenga inishuwarenzi yekufamba kana kutsvaga imba yemunharaunda, vafambi vari kushandisa masocial network uye vezvenhau kupfuura nakare kose kubatsira kuita sarudzo.
Tags: 4 nyeredzi5 nyeredzimutsaHospitality Industrykuongorora vaenziinfographicRevenueReviewsevanhu vezvenhaupasocial networksocial networknyeredzifambatravel industrywongororo dzekufambaongororo dzemushandisi
Enterprise Yemagariro Media Management kubva kuSyncapse
Yemagariro Media Kushambadzira Indasitiri
Mbudzi 30, 2012 na3: 14 PM
Ichi chaicho chikuru infographic! Inoratidza huwandu hwemagariro evanhu huri kukura. Ndakawana imwe infographic iyo ine chikamu chidiki chemagariro enhau pairi http://www.nbrii.com/resources/infographics/nbri-infographic-5hospitalitytrends.jpg asi haina kutarisisa zvese pasocial media senge iyi.
Mbudzi 30, 2012 na3: 20 PM
Yakakura infographic. Ngaave mumwe watinoisa!
Mbudzi 30, 2012 na3: 43 PM
Iyo yakanaka yakanaka pasina kupokana, yakawanda yakakura infographics kunze uko, kugamuchira vaeni kunoratidzika kunge kuri indasitiri iri kunyatso shanduka, ndine chokwadi chekuti pane TON yevamwe kunze uko.